BestCities 2019 Copenhagen Global Foramu kutarisa kune ramangwana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » BestCities 2019 Copenhagen Global Foramu kutarisa kune ramangwana
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Denmark Kuputsa Nhau • dzidzo • Hurumende Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Dai 21, 2019
BestCities Global Alliance neCopenhagen Convention Bureau (CCB) zvakagadzirirwa kuongorora kuti ramangwana rakamira sei kumasangano nemasangano emakongiresi aine tarisiro yekugadzira zvinogara zvakanaka. Kuongorora iyo Congress yeChamangwana - Kusimbisa Impact ichave iri dingindira repamusoro regore rino BestCities Global Foramu, irikuitika muCopenhagen 8 - 11 Zvita 2019.
Kushanda pamwe chete neDanish Design Center uye nevanoongorora ramangwana rePublic Futures, BestCities uye CCB ichavandudza mamiriro ezvinhu angango sangana nemusangano we2040. Iyo inoyevedza chirongwa chedzidzo, nzwisiso uye netiweki zvinoreva kuti masangano anotora chikamu anowana nzwisiso yakadzama uye ruzivo rwematambudziko ari kubuda anotarisana neindasitiri yemisangano, uye maitiro ekuvaka nhaka uye kusvika. Vamiriri vachasiya iyo Global foramu nekuwana kune dhijitari chishandiso chekushandisa mukuumbwa kwemaitiro emangwana. Sechikamu cheBestCities 'kuzvipira kumabasa ekuvandudza indasitiri, chishandiso ichi chichaitwa kuti chiwanikwe kune wese munhu anofarira. Zvinonzwisisika hurukuro dzechiitiko dzinozoitawo hwaro hwechena bepa rine mazano ekurudziro, rinoburitswa kutanga kwa2020.
Iyo yakasarudzika Global Forum chirongwa chichagadziriswa naDavid Meade, mudzidzisi uye muongorori muInternational bhizinesi uye Strategic kuYunivhesiti yeUlster. Chirongwa ichi chinosanganisira dzinodzamisa pfungwa zvikamu zvedzidzo, kuita mashopu anoshanda, zviitiko zvinoenderana nenyaya uye matambudziko ekupindirana, akagadzirirwa kuvhura ruzivo rwekubatana mukati mekamuri. Sangano naClaus Meyer, mubatsiri werestaurant yepasirose, Noma, akatogadzirirwa kuve chiitiko chinoratidzira.
Nhume dzichavawo nemukana wekumisidzana nevezera ravo nekukudziridza netiweki dzepasirese, nezviitiko zvakaita seAmbassador Kudya kwemanheru, kuunza vamiririri pamwe nevamiriri venzvimbo vane hunyanzvi uye nhare dzakakosha.
Ihotera yepamusoro ichave iri yepamusoro yeCopenhagen Marriot Hotel, iri padyo neKalvebod Brygge pamhenderekedzo yegungwa. Zvirongwa zvakarongwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzakakomberedza guta, zvichibvumira vatori vechikamu kuti vaone zvakanakisa zveCopenhagen. Vachasvika pakuziva maDanes, vodzidza nezvetsika dzeDanish, uye nei nyika ichive pamusoro pe 'rufaro' zvinyorwa. Zvakare nekuona zvimwe zvezvakanakisa zvekupa mupiro munyika, vanoenda vanozoonawo pfungwa yechokwadi ye'hygge '* pamashiripiti eZuva Wonderland paTivoli Gardens.
Global Forum inobvumidza vamiririri kubatana pamwe chete uye kuwana ruzivo rwakadzama rwe gumi nemaviri emisangano yemisangano pasi pedenga rimwe, nemisangano yeCity Café uye netiweki dzekudyidzana neveBestCities 'vanobatana navo: Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo neVancouver.
BestCities Managing Director, Paul Vallee akati:
“Chakakosha pakati petsika dzeBestCities kusimbaradza kubatana kwepasi rose mutsika nemagariro. Semubatanidzwa wevane gumi nevaviri vadyidzani vakavakirwa pasirese, isu tinotenda kuti kushanda pamwe chete kunoita kuti tigadzire zvinogara, zvinobatsira kumaguta edu ese nevatengi vedu zvakare. Iyo indasitiri yemisangano yepasirese inomhanyisa uye inogara ichichinja.
“Chirongwa chedu chinoshamisa chedzidzo, njere nekubatana pamusangano wechina wepagore weGlobal Forum chichagadzirisa mikana nezvinetso izvo ramangwana rakachengetera kumasangano epasi rose nemaindasitiri emakongiresi. Vatauri vedu vepasirose-yepasi, mashopu uye zvikamu zvekubatanidza zvinopa vatori vechikamu zano rehungwaru uye maturusi anoshanda avanogona kushanda muzvirongwa zvavo zvenguva refu.
Kit Lykketoft, Director weGungano reWonderful Copenhagen uye Nhengo yeBhodi yeBestCities Global Alliance vakati:
“Takatoronga rwendo rwekuvaka zviitiko zvakadzama zvakatsvagiranwa zvine chekuita neindasitiri yepasi rose munzira inoenda kuGlobal Forum. Tinoshuvira kuti iyo Copenhagen Global Foramu ive nemhedzisiro uye kuti iunze hurukuro yepasirese padanho rine ruzivo. BestCities mubatanidzwa-unotungamira mubatanidzwa uye isu tinoda kugovana uye kubatana-kugadzira neyese indasitiri. Chete kuburikidza nekubatana kwechokwadi kukanganisa izvi zvinogoneka. Nhaka inouya kubva pakuda chinzvimbo uye kugona kutora maonero matsva. ”
BestCities Global Forum yegore rapfuura muBogotá yakapembererwa semubudiriro unoshamisa, ne100% yenhume dzakanzverwa dzichitaura nezveGlobal Forum dzakazadzisa zvinangwa zvavo zvikuru zvekupinda uye kuti vaizozvikurudzira kumasangano avo epasirose musangano.
Achitaura nezve chiitiko che 2018 Global Forum muBogotá, Wesley Benn, Executive Chairman weDhijitari Yakavakirwa Nzvimbo Institute akati:
“Semunhu mutsva aipinda musangano weGlobal Forum ndakafadzwa nekurongwa kwechiitiko ichi, zvine chekuita nedandemutande rangu, budiriro uye zvido zvedzidzo, uye pfungwa yenzanga nekubatana kwayakakurudzira pakati pevaipinda. "Ndinokurudzira zvakasimba chiitiko ichi kune mamwe masangano anotsvaga nzira dzekuwedzera maratidziro avo uye kupindura kwavo mukuchinja kwenzvimbo."
Kunyoreswa kwe BestCities Global Foramu Copenhagen ikozvino yakavhurwa, nenzvimbo makumi matatu neshanu dzinowanikwa kune vanokwanisa vemasangano epasi rese. Iko hakuna mari yekupinda, nekutenderera-kuenda nendege, pekugara uye chikafu chevose vanopinda vanokwanisa vepasi rese musangano vatungamiriri vakafukidzwa neBestCities.